Chọpụta ọmarịcha Paradores na Galicia | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | ulo, General
na Paradores bụ akụkụ nke ụlọ ọrụ nkwari akụ nke nwere ntọala na Spain na ugbu a na Portugal. Nslọ ndị a na-apụta maka inwe saịtị nke nnukwu akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ ọdịbendị. Ọ bụ ya mere ha ji bụrụ ebe pụrụ iche ha ga-anọ, zuru oke iji nwee obere akụkọ ihe mere eme na mpaghara ndị njem.
Ka anyị lee Paradores na Galicia, nke bara ụba ma dị na ụlọ ndị mara mma, ọtụtụ n'ime ha nwere ọtụtụ akụkọ ntolite n'ime. Na netwọk a nke ndị paradors enwere ike ịnụ ụtọ ebe pụrụ iche maka ihe nketa ha, yabụ ọ bara uru ịnọ na ha.
1 Kedu ihe bụ Paradores de turismo
2 Parador nke Santiago de Compostela
3 Terlọ Monterrei Parador
5 Parador nke Cambados
7 Parador nke Monforte de Lemos
8 Nkọwa nke Pontevedra
10 Parador nke Santo Estevo
Kedu ihe bụ Paradores de turismo
Networklọ ọrụ ụlọ ọrụ Paradores de Turismo nwere ụlọ obibi dị na ụlọ ma ọ bụ ụlọ akụkọ ihe mere eme. N'ezie, Ejiri 30 nke ụlọ nkwari akụ ya dị ka Akụ nke Mmasị Omenala. Ha nwere nnukwu uru akụkọ ihe mere eme na nke ọrụ nka ma mee ka ha banye oghere maka njem nleta enyerela aka ichekwa ihe nketa ahụ ma mee ka ọ dị ọhụrụ. Na Galicia enwere ọtụtụ ebe nkewapụtara dị ka paradores, ụfọdụ n'ime ha dị na ụlọ ụlọ ochie.
Parador nke Santiago de Compostela
A maara Parador de Santiago de Compostela dị ka Hostal dos Reis Católicos ma dị na Plaza del Obradoiro, n'akụkụ Katidral a ma ama nke Santiago. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ebe pụrụ iche iji nwee ọ enjoyụ na mpaghara akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ na kpọmkwem oge mbata nke narị narị ndị njem ala nsọ. Emepụtara ụlọ a dị ka Hospitallọ Ọgwụ Royal na narị afọ nke XNUMX iji nwee ike ịga ndị njem ala nsọ bịara Santiago. Lọ a bụ Parador Museum nke nwere klọọkụ anọ na ebe iri nri mara mma. Na mgbakwunye, o nwere ụlọ ụka a kapịrị ọnụ nke ekwupụtala dị ka Ncheta Mba.
Terlọ Monterrei Parador
Ihe ngosi a dị na parish Santa María na Monterrei, Ourense. Parador dị na a mbụ n'obí-ebe ewusiri ike nke na-ahụ na-agbachitere ókè na Portugal, nke dị naanị kilomita 28. Palacelọ a dị elu karịa ụlọ elu Baroncelli ma nwee ọtụtụ mgbidi mgbidi, ụlọ ọgwụ maka ndị njem ala nsọ, nnukwu ụlọ ya na ala ala ya, ndị na-elekọta ya, ụka Santa María de Gracia na Obí nke Ngụgụ. A na-ahụta ya dị ka nnukwu obodo ndị Galician wee nwee parador ugbu a.
Ihe ngosi a dị n'akụkụ oké osimiri, na Pontevedra obodo nke Baiona, na nso ókè ya na Portugal yana echiche nke Cíes Islands a ma ama. Ọ gụnyere ụlọ ndị a chọrọ mma pụrụ iche, imirikiti nwere echiche nke oké osimiri na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ebe ị nwere ike ịnwale nri ndị Galician dị ụtọ.
Parador nke Cambados
Emi odude ke ọnụ ọgụgụ na-enye anyị na-atọ ụtọ Albariño mmanya ị ga-ahụ Parador de Cambados a ma ama, n'etiti obodo ahụ. Ihe a dị na Pazo de Bazán ochie. Ndị pazos bụ nnukwu ụlọ na manors dị mkpa. Taa, ọtụtụ n'ime ha abụrụla ebe obibi mara mma. Parador a nwere ime ime ụlọ na mbara ala
Ihe ngosi a dị na obodo Ferrol, nke dị na A Coruña. Bụ a ụlọ mara mma nke ndị ọkwọ ụgbọ mmiri mara mma ya na ube agba ya nile. Parador dị n'etiti, ebe ọ dị na Barrio de la Magdalena.
Parador nke Monforte de Lemos
Nke a parador dị n'ime nnukwu ihe owuwu nke San Vicente do Pino, n'obodo Portuguese nke Monforte de Lemos. Parador dị na Obí ochie nke Counts nke Lemos ma na-esote ya bụ Torre del Homenaje na ebe obibi ndị mọnk nke San Vicente do Pino. Nke a bụ ebe dị mma iji mara Ribeira Sacar, ya na mmanya ndị a ma ama, ma were njem ụgbọ mmiri site na Sil Canyons.
Nkọwa nke Pontevedra
N'ime obi obodo Pontevedra bụ parador ya, na ụlọ Renaissance nke malitere na narị afọ nke XNUMX. N'ebe ọwụwa anyanwụ Parador bụ ebe obibi nke Counts nke Maceda ọ dịkwa n'akụkụ ochie nke obodo ahụ, n'ime ebe dị anya nke ebe ndị masịrị dị ka Iglesia de la Peregrina.
Ihe ngosi a bu emi odude ke inua akpa Eo, n'ógbè Lugo. Parador bụ ụlọ Galician ochie nke dị n'obodo a na nso ókè ya na Asturias na oké osimiri.
Parador nke Santo Estevo
Ihe nlere a mara mma dị na ebe obibi ndị mọnk mbụ nke Santo Estevo, na obi Ribeira Sacra na Ourense. Ọ bụ ọmarịcha paradaịs mara mma nke gburugburu ya, nke e wuru n'ụdị Baroque na Romanesque. E kwupụtara ya dị ka ihe ncheta nka nke akụkọ ihe mere eme na 1923.
Nke a parador dị na a ochie omenala Galician pazo, na ụdị ụlọ ya. Ọ dị n’obodo Tui, nke dịdewere Portugal, n’ógbè Pontevedra.
Nke a parador na-emi odude ke a ahụkarị Galician nkume pazo. Ọ dị na Verín, ebe a na-eme Carnivals ndị kacha ewu ewu na Galicia niile. N'aka nke ọzọ, ọ bụ otu n'ime ụlọ ezumike ole na ole nwere ọdọ mmiri ya, ebe ọ bụ na obodo ahụ dị anya site n'ụsọ oké osimiri.
Ejiri Parador de Vilalba na ụlọ ochie nke ka nwere ụlọ elu nke oge ochie. Na-eju Halllọ Nzukọ nke Andrade anya, na mkpuchi ya nke ogwe aka na ihe osise mgbidi. Vilalba bụ obodo dị jụụ na Lugo nke Camino del Norte gafere Santiago de Compostela.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » ulo » Paradores na Galicia